Nitsangana i Kristy - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Mifantoha amin'i Jesosy 2022-03
Avia ary jereo!
Inona no hafatr’i Jesosy?
Torohevitra tsara sa vaovao tsara?
Fetin’ny Fiakaran’i Jesosy any an-danitra
Ny Fanahy Masina: Fanomezana!
Oviana ianao no voavonjy?
Ny fiainana ao amin’i Kristy
Rehefa lavo ny fatorana anatiny
Mifantoha amin'i Jesosy 2022-02
Ny fidirana amin'ny fitoerana masina
Velona eto an-tany ve Andriamanitra?
Efa akaiky ny fanjakan’Andriamanitra
Ny menarana varahina
Eritrereto am-pifaliana i Jesosy
akimpy ny masonao ary matokia
Ny fanoharana momba ny mpanefy tanimanga
Jesosy - Ranon'aina
ao amin'i Kristy
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2020-02 > Natsangan'i Kristy
Ny finoana kristiana dia mijoro na mianjera miaraka amin’ny fitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty. “Fa raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny finoanareo, ary mbola ao amin’ny fahotanareo ihany ianareo; dia very koa izay efa nodimandry tao amin’i Kristy » (1. Korintiana 15,17). Ny fitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty dia tsy foto-pampianarana tokony harovana fotsiny fa tsy maintsy mitondra fiovana azo ampiharina eo amin’ny fiainantsika kristiana. Ahoana no azo atao?
Ny fitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty dia midika fa afaka matoky azy tanteraka ianao. Nilaza tamin’ny mpianany mialoha i Jesosy fa hohomboana amin’ny hazo fijaliana izy, ho faty, ary hatsangana amin’ny maty. «Hatramin’izany andro izany dia nanehoan’i Jesosy tamin’ny mpianany fa tsy maintsy hankany Jerosalema Izy ka hijaly mafy. Hovonoin’ny loholona sy ny lohan’ny mpisorona ary ny mpanora-dalàna Izy, ary hitsangana amin’ny andro fahatelo” (Matio 1.6,21). Raha nilaza ny marina momba an’io lafiny io, ny amin’ny fahagagana lehibe indrindra amin’ny rehetra i Jesosy, dia mampiseho izany fa azontsika antoka fa azo ianteherana amin’ny zava-drehetra izy.
Ny fitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty dia midika fa voavela ny fahotantsika rehetra. Nambara ny fahafatesan’i Jesosy rehefa nankany amin’ny fitoerana masina indrindra indray mandeha isan-taona ny mpisoronabe tamin’ny andro fanavotana mba hanao fanatitra noho ny ota. Ny fotoana nidiran’ny mpisoronabe tao amin’ny fitoerana masina indrindra dia narahin’ny Israelita tamin’ny fihenjanana: hiverina ve izy sa tsia? Toy inona moa ny hafaliany rehefa nivoaka avy tao amin’ny fitoerana masina indrindra izy ka nanambara ny famelan’Andriamanitra, satria nekena nandritra ny herintaona ny sorona! Nanantena mpamonjy ny mpianatr’i Jesosy: “Nefa nanantena izahay fa Izy no hanavotra ny Isiraely. Ary ambonin’izany rehetra izany, androany no andro fahatelo nisehoan’izany.” (Lioka 24,21).
Nalevina tao ambadiky ny vato lehibe i Jesosy ary nandritra ny andro vitsivitsy dia tsy nisy famantarana fa hanatona indray. Fa tamin'ny andro fahatelo dia nitsangana indray i Jesosy. Tahaka ny nisehoan'ny mpisoronabe tao ambadiky ny ridao nanehoana fa nekena ny sorona nataony, ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia nanaporofo fa neken'Andriamanitra ny sorona nataony, noho ny fahotantsika.
Ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia midika fa hisy fiainana vaovao. Ny fiainana kristiana dia mihoatra noho ny finoana ny zavatra sasany an'i Jesosy ihany, ny fandraisana anjara ao aminy. Tian'i Paoly ny hamaritana ny dikan'ny hoe Kristiana amin'ny fanehoany azy "ao amin'i Kristy". Io teny io dia midika hoe mifandray amin'i Kristy amin'ny finoana isika, ny Fanahin'i Kristy no mitoetra ao amintsika, ary antsika ny fananany rehetra. Satria efa nitsangana i Kristy, arakaraka ny fanatrehany velona, ​​miaina ao Aminy avy amin'ny firaisana Aminy isika.
Ny fitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty dia midika fa resy ny fahavalo farany, dia ny fahafatesana. Nanapaka ny herin’ny fahafatesana indray mandeha Jesosy: “Andriamanitra nanangana Azy ka nanafaka Azy tamin’ny fanaintainan’ny fahafatesana, satria tsy hainy hohazonina amin’ny fahafatesana Izy” (Asan’ny Apostoly 2,24). Vokatr’izany dia “tahaka ny ahafatesan’ny olona rehetra ao amin’i Adama no ahaveloman’ny olona rehetra kosa ao amin’i Kristy” (1. Korintiana 15,22). Tsy mahagaga raha afaka nanoratra toy izao i Petera: “Isaorana anie Andriamanitra, Rain’i Jesosy Kristy Tompontsika, Izay niteraka antsika ho amin’ny fanantenana velona, ​​araka ny haben’ny famindram-pony, tamin’ny nitsanganan’i Jesosy Kristy tamin’ny maty, lova tsy mety maty sy tsy misy loto ary tsy mety lo, izay tehirizina any an-danitra ho anareo » (1. Petrus 1,3- iray).
Satria nanolotra ny fiainany i Jesoa ary nanaiky azy io indray, satria efa nitsangana i Kristy ary tsy misy na inona na inona, dia miaina ao Aminy isika ankehitriny, miankina amin'ny fanatrehany velona, ​​avy amin'ny firaisana Aminy.
nataon'i Barry Robinson